रोट्रयाक्टद्वारा स्वेटर वितरण कार्यक्रम – Nepali Profile
रोट्रयाक्टद्वारा स्वेटर वितरण कार्यक्रम
Bikram Chhetri २६ पुष २०७५, 4:09 pm
नेपालमा छरिएर रहे्का रोट्रयाक्ट क्लबहरु मध्य जोन १३ मा पर्ने रोट्रयाक्ट क्लब अफ हेटौडा, रोट्रयाक्ट क्लब अफ मकवानपुर, रोट्रयाक्ट क्लब अफ विरगन्ज र रोट्रयाक्ट क्लब अफ विरगन्ज मेट्र्र्ररोपोलिस द्वारा मकवनपुरमा रहेको श्री जनता मा. बि सुकौरामा स्वेटर वितरण कार्यक्रमको अध्य्क्षता रो. बिबश अर्यालले गर्नु भएको थियो ।
विद्यालय ब्यस्थापन समितिका अध्यक्षज्‍यू प्रमुख आतिथि हुनुहुन्थियो भने जोन १३ का जोनल रोट्रयाक्ट रिप्रेन्चेटिभ रो. अनुराग अधिकारि र अभिभावक सन्घका अध्य्क्षको विशिष्ठ अतिथि हुनुहुन्थियो। विद्यालयमा रहेका आफु भन्दा कम भाग्यमानि १०० जना विद्याथिलाई स्वेटर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रम सम्योजक रोट्रयाक्ट क्लब हेटौडाका कमुय्निटि सर्विस डाइरेक्टर रो. सरोज देवकोटाले यस कार्यक्रम बारे प्रकास पार्नु भयो ।
जाडो मौसममा न्यानो पनको महसुस सन्गै आफ्नो पढाईमा थोरै भए पनि केहि सहयोगको भावानाले सो कार्यक्रम सम्पन्न भयो । जोन १३ का जोनल रोट्रयाक्ट रिप्रेन्चेटिभ रो. अनुराग अधिकारिले रोट्रयाक्टमा हुने गतिबिधि बारे जानकारि सन्गै सोहि कार्यक्रमको शुभकामाना एवं सम्पुर्ण सहयोगि हातहरुलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
यसैगरि प्रमुख आतिथिको आफ्नो सानो मन्तब्य सन्गै यस कार्यक्रमका सम्पुर्ण सहयोगि हातहरु प्रति विशेष धन्यवाद दिनुभयो ।
होम्लसको भनाई राख्दै “ज्ञानी मानिसहरुको कर्तव्य शिक्षा दिनु हो अनि बुद्धिमानहरुको कर्तव्य त्यसलाई सुन्नु” यस कर्यक्रमका अध्य्क्ष रो. बिबश अर्यालज्‍युले रोट्रयाक्टको बारेमा प्रस्ट पार्दै सहयोगि मनहरु लगायत उपस्तिथिलाई धेरै धेरै धन्य्वाद दिदै कार्यक्रम समापन गर्नु भयो ।
स्वेटर वितरण कार्यक्रमको सन्चालन भने यसै विद्यालयका प्राचार्यले गर्नु भएको थियो ।